Tonizia: Nandà tsy hody ireo Serba mpizaha tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2018 9:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, Italiano, 日本語, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
(Marihina fa tamin'ny 21 Janoary 2011, fotoana nisian'ny tolona mamaivay tao Tonizia no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mpizaha tany Serba miisa iraika ambin'ny folo niala sasatra tany amin'ny tanàndehibe morontsiraka fialan-tsasatra Toniziana any Sousse sy Hammamet no nandà ankitsirano ny hiala ny firenena mialoha ny Alakamisy, 20 Janoary 2011, andro fialatsasatr'izy ireo farany. Noho ny hamehana, nasaina nody tany Belgrade amin'ny sidina farany Jat Airways izy ireo ny herinandro mialoha, kanefa raha nandà izany dia nilaza ny masoivoho Serba fa tandindonin-doza izy ireo ary tsy afaka manome antoka ny sidina avy any Tonizia ny andro tokony hodiany ny Masoivoho .
Marhaba Palace, Sousse, Tonizia (Sary: Sasa Milosevic)
Na dia lavitry ny foiben'ny korontana ara-politika Toniziana aza no misy ireo toeram-pialantsasatra ireo dia natao indrindra ny famoahana ny vahiny sy ny fanakatonana ny trano fandraisam-bahiny noho ny antony ara-piarovana, satria miha-tsy ampy tsikelikely ny sakafo sy ny rano.
Tao anatin'ny toe-javatra tena sarotra i Milica Čubrilo Filipovic, ambasadaoron'i Serbia any Tonizia, sy ny zanany na izany aza : nitantara izy fa “maneno avy amin'ny vazantany rehetra ny bala”, nandritra ny famoahana hody an-tanindrazana ny zanany. Nampitandrina ny mpizaha tany Serba tamin'ny mety ho loza hiseho izy ireo amin'ny maha vahiny ao Tonizia azy ireo.
Nanampy tamin'ny famoahana ireo mpizaha tany Makedoniana miisa 11 ny masoivoho Serba, satria tsy manana masoivoho any Tonizia i Makedonia. Anisan'izany koa ny Rosiana iray niaraka tamin'ny zanany roa .
Nilaza tamin'ny fampitam-baovao Serba ireo mpizaha tany Serba fa afa-po ry zareo tamin'ny fiarovana azony tamin'ireo Toniziana. Araka ny filazan'izy ireo, nisy ny mpitandro filaminana manokana tao an-tampon'ny trano fandraisam-bahiny nisy azy ireo, sady nisy ihany koa niambina tany ivelany. Ireo mpanao fihetsiketsehana nitoraka vato ny bisy nandehanan'izy ireo no hany olana nanjo azy ireo nandritra ny fandehanana fiara nankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Monastir, kanefa tsy nisy naratra.
Tezitra ireo mpizaha tany nanaiky niverina tany Serbia noho ny fiafaran'ny fialantsasatry ny ririnina an'izy ireo mialoha ny fotoana. Mpivady efa misotro ronono, Dara sy Mihajlo Stancevic, ohatra, dia nilaza tamin'ny gazety Serba iray fa efa fito taona izy ireo no nanao fialantsasatry ny ririnina tany Tonizia an'i Ben Ali ary nankafy izany, tsy noho ny hatsaran'ny toetrandro ihany, fa noho ny vidim-piainana mora lavitra noho ny any amin'izy ireo any Serbia.
Nanakiana ny fitondrantenan'ny mpiray tanindrazana aminy tao Tonizia ireo mpitsidika tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra Krstarica.
Nanoratra i Vazdusasta hoe:
Tena lasa tia tena mihitsy isika … ary tsy miraharaha … Nilaza ny lehilahy iray fa tsy handeha hody izy, kanefa kosa, honerana izy … nilaza ny vehivavy iray fa tena nahafinaritra ny tao amin'ny hotely, saingy tsy maintsy nody izy … tena tsy mahatsapa ny fangoraham-po sy ny halemem-panahy mihitsy ny olona … raha tsy miraharaha ny fiarovana azy ireo izy, nahoana no tsy mieritreritra izay mety hanjo ny Toniziana noho ny amin'izy ireo izy ireo. Raha nisy namono na nandratra izy ireo, dia hiseho amin'ny pejy voalohany amin'ny fampitam-baovao rehetra manerantany i Tonizia.
Raha nilazalaza ny momba ny toe-tsain'ny mpizaha tany dia nanazava izy hoe:
Tsy afaka hitanin'andro any Tonizia ianao amin'ity taona ity. […] Tsy te hody izy ireo satria mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dimy kintana izay tsy takatry ny volany rehefa tonga maro ny mpizaha tany, hany ka mandeha any amin'ny vanim-potoana tsy dia misy mpiala sasatra izy ireo. Izany no mampalahelo amin'ity tantara rehetra ity. Misy olona maniry fatratra ny efitrano fandraisam-bahiny mihaja na dia hahafaty azy ireo aza izany…
Nanoratra i Donqihote hoe:
Mihevitra izy ireo fa azo antoka ny hoteliny, kanefa mety ho eo am-pelatanan'ny andian-jiolahy mitam-piadiana sy lozabe izy ireo rahampitso .
Gaga i Jug Bogdan :
Mikorontana tanteraka i Tonizia , nefa te-hitanina andro ry zareo.
Naneso i Gost ao amin'ny Bundolo.org hoe:
Mpizaha tany mampalahelo. Vondrona Toniziana noana sy “maloto” no nanimba ny fahafinaretany. Na ireo trano fandraisam-bahiny aza dia tsy ampy sakafo ho an'ireo mpizaha tany noana ary tsy voadio ny ranon'ny dobo.